Momba anay | Mit-ivy Industry Co., Ltd.
MIT –IVY Chemicals Industry Co., Ltd. dia mpanamboatra sy mpivarotra ambongadiny simika mandritra ny 16 taona izay nanangana orinasany miisa 4 miaraka amin'ny fitaovana famokarana feno ary ny fitantanana sy ny fikojakojana ny milina.
Mampiasa teknolojia famokarana mandroso sy fomba fitsapana izahay hahatsapa famokarana, fanaraha-maso kalitao mifanaraka amin'ny fenitra. Nankatoavin'ny SGS, ISO9001, ISO140 01, GB / HS16949 ary T28001 izahay.
Ireto misy vokatra lehibe mit-Ivy：
Mpanelanelana amin'ny loko, mpanelanelana fanafody .dyes.simika manokana .matotra manokana
2-Naphthol Bon acid 2,5-Dichlorotoluene 2,3-Dichlorobenzaldehyde 2 ', 4'-Dichloroacetophenone 2,4-Dichlorobenzyl alika 3,4'-Dichlorodiphenyl ether "1,3-Dichlorobenzene
CI Basic mavo 2 "Crystal violet lactone CVL Methyl violet" Basic Green 4
Dyestuffs, mpanelanelana amin'ny fanafody, mpanelanelana amin'ny pestiside, adhesives, agents mpanampy sy indostria hafa. dia novokarin'ny teknolojia farany misy kalitao milamina sy fahadiovana mihoatra ny 99,7%.Ny tsenanay lehibe dia misy an'i Amerika, India, Afrika, Indonezia, Torkia, Azia atsimo atsinanana, Azia Andrefana sns. Izahay no tena mpamatsy vokatra simika tsy eo an-toerana ihany fa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. MIT-IVY Indostria Main vokatra mizara 97% ny tsena anatiny manokana amin'ny famokarana sy ny fitantanana, Afaka manome ny vokatra amin'ny fifaninanana vidiny kokoa. miaraka amin'ny kalitao premium sy ny vidiny ary tongasoa anao hanoro hevitra.
Ny vovo-dronono Sodate sulfate anhydrous indostrialy dia iray amin'ireo akora simika fototra, be mpampiasa amin'ny akora simika, taratasy sy vera, loko, fanontana sy fandokoana, indostrian'ny fanasan-damba sy fanafody. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fanaovana fibre synthetic, hoditra, metallurgy nonferrous, enamel porcelain sns. Ny vokatra indostrialy anhydrous sodium sulfate amin'ny fahadiovana avo lenta sy ny fahadiovana tsara, manarona ny vokatra 20 mesh - 2000 harato, ampiasaina indrindra amin'ny reagents, batteres reagents, fonon-tanana vita amin'ny latabatra, mpanelanelana amin'ny famonoana bibikely, zezika, mpanelanelana amin'ny fanafody ary additives sakafo sy saha hafa, miaraka amin'ny ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona dia mifamatotra akaiky.
1. Ny mpanjifa no voalohany. Izahay dia manandrana mitondra tombony betsaka ho an'ny mpanjifanay mifototra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.
2. Ny fahatokisana no zava-dehibe indrindra.
3. Ny fifehezana kalitao no fototra iorenanay.
4. fahatsapana andraikitra lehibe.
Ho tompon'andraikitra amin'ny vokatra sy ny mpanjifanay ary ny mpamatsy antsika ihany izahay fa ny fiaraha-monina koa.
Manaraka ny tombotsoan'ny fiaraha-monina izahay ary mamorona lanja tsy tapaka ho an'ny mpanjifa, mitazona ny tsy fivadihana miaraka amin'ny tombotsoan'ny fiaraha-miasa sy ny fanambinana iraisana. Manana mpiasa teknika matihanina kilasy voalohany amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra izahay. Noho izany dia afaka manome mpanelanelana lehibe ho an'ny tetikasanao izahay ary hanafohezana ny vahaolana synthesis mba hanomezana anao vokatra madiodio avo. Tompon'andraikitra amin'ireo mpanjifanay, mpiasa, tontolo iainana ary fiaraha-monina misy hetsika haingana sy fahombiazana ara-toekarena miaraka tsy azo sarahina. Mifantoka aloha isika amin'ny fampidinana ireo mari-pahaizana momba ny tontolo iainana sy ara-tsosialy ao amin'ny orinasan-tsika mikatsaka làlana vaovao maharitra. Ny teknolojia aloha, ny kalitao no fototra, ny mpanjifa Andriamanitra, ny tsy fivadihana no fototra ".
Ny tanjontsika farany:
Miorina amin'ny ezaka mitohy amin'ny famolavolana sehatry ny simika vaovao, manolotra vokatra ara-tontolo iainana sy haitao avo lenta izahay hamaly ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
MIT-IVY INDUSTRY dia manolo-tena hanompo anao amin'ny fanoloran-tena.
2.Ny fonosana koa dia mety ho takian'ny mpanjifa
3.Ny fangatahana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora
4. Vidin'ny orinasa.
5. Fanaterana haingana. Manana fiaraha-miasa tsara amin'ireo mpandefa matihanina maro izahay; Afaka mandefa ny vokatra aminao izahay raha vao manamafy ny baiko ianao.
Azontsika atao ny mivezivezy fandefasana entana, mihaona amin'ny MOQ orinasa Hamboarinay ny fandefasana azy ireo avy eo amin'ny orinasa any amin'ny trano fitahirizanao.
Azontsika atao ny manamafy ny kaontinao madinidinika avy amin'ny ozinina marobe, manatitra ny rehetra amin'ny alàlan'ny làlana mahomby indrindra misy. Amin'ny fotoana fametrahana ny baiko dia hanolotra antsipiriany aminao izahay momba ny habetsaky ny entana tsirairay ary ny haben'ny container no hampiasaina.
Manome fonosana mendrika feno ranomasina izahay, mandamina ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny vokatra ao amin'ny trano fitahirizanao na foibe fizarana.
Azo atolotra ny fandefasana.
- Mampiasa ny mpampita entana
- FOB mankany amin'ny seranana any Shina
- CIF mankany amin'ny seranana akaiky anao
Na manana mpampandroso anao manokana ianao na te handamina ny fandefasana azy; na tianao ny FOB na ny CIF, dia faly izahay manonona sy manome izay fomba rehetra safidinao. Aza misalasala mifanakalo hevitra momba ny safidy rehetra miaraka aminay.